अरबपति भगवान युद्ध उपन्यास अध्याय 2445 - ० | | XperimentalHamid
अरबपति भगवान युद्ध उपन्यास अध्याय १2445 - - १2446
जुन 20, 2021 by हिसम उल्लाह
पढ्नुहोस् अध्याय २ 2445 १-२ 2446 २ उपन्यास अरबपति भगवान को युद्ध (अनुवादित संस्करण) को नि: शुल्क।
अध्याय ०१ - ०।
तिनीहरूको काम शैतानलाई सजाय दिन छ!
तपाईले रगतको मूल्य तिर्नु पर्ने भए पनि, सबैजना मर्नु पर्ने भए पनि, तपाई हिचकिचाउनु हुन्न!
ह्यारिसन र अन्यहरू, उनीहरूको अनुहार दृढ संकल्पले भरिएका थिए। यस समयमा उनीहरूले केहि विचार गरेनन्, उनीहरूको आँखा दानव राजालाई हेरिरहेका थिए जो जिiang्गिंगसँग कडा लडिरहेका थिए।
ऊ सबैको लक्ष्य हो!
यस क्षणमा, जियाiang निingले ढुmon्गाको निर्माणमा दानव राजालाई परिचय दिन पर्खिरहेका थिए, तिनीहरूले हतार गरे।
जिiang निing्गको जि डाओ बक्सि technique प्राविधिक चरम सीमामा पुगेको छ र वरपरको हावा यसैसँग टम्बल हुँदैछ।
जस्तो कि उम्लदो स्टीम, मुट्ठीको घर्षणबाट तनावले वरपरको तापक्रम बढ्यो।
दानव राजा थोरै चकित भए। उनले लडाई गर्ने क्रममा ज्याiang निing अझ साहसी बन्ने आशा गरेनन् र उनी भेट हुँदा पनि झन् बलियो भए।
यस किसिमको लडाई प्रतिभा केवल साधारण व्यक्तिहरूले गर्न सक्ने कुरा मात्र होइन।
"खराब छैन! खराब छैन! खराब छैन!"
ऊ हाँसे, तर उसको स्वर ठट्टामा उडायो।
उहाँ जस्तो पुरानो राक्षस ज्यादै धेरै माध्यमबाट गुज्र्यो, र लडाईको अनुभव ज्याiang नि N्ग्डु भन्दा धेरै धनी छ। उसलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यदि युद्धमा युद्धको झगडा भयो भने यो मनोवैज्ञानिक विनाश हुनेछ।
धेरै व्यक्तिहरू बल र लगनशीलतामा राम्रो हुँदैनन्, तर पत्ता लगाए कि उनीहरूले आफ्ना विरोधीहरूलाई हराउन सक्दैनन्, आफ्नै? Lu Wulu Xishan'er लाई माया गर्छ? आत्मविश्वास बिस्तारै खस्कियो।
यसैले, यसले असफलता निम्त्यायो।
तर ज्याiang निing त्यस्ता व्यक्ति होइनन्, उसको मुटु एकदमै बलियो छ, उनी कुनै कुराको कहिल्यै डराउँदैनन्, र शैतानले के भन्छ भनेर वास्ता गर्दैनन्।
उसको एउटै मात्र विचार छ!
जबसम्म उसले शैतानलाई मार्छ, तब उसले आफूले माया गरेको मानिसलाई रक्षा गर्न सक्छ। यो एक मात्र मार्ग हो, र यो उसको वर्तमान दायित्व पनि हो, जिम्मेवारी उसले आफ्नो जीवन दिन सक्छ।
उनले दानव राजाले भनेको कुरालाई बेवास्ता गरे र अझै पनि आफ्नो मुट्ठी हल्लाउँदै, एक-एक गरी, नडराइकन, हतार र ढिलो नगरी, सधैं आफ्नै लयको अनुसरण गर्दै।
ज्याiang निingको मुट्ठीहरू छिटो, छिटो, निर्दयी र सहि थिए। यदि ऊ होशियार भएन भने दानव राजाले केहि पन्चहरू पनि पाउने थियो। यद्यपि उनी गम्भीर घाइते भएनन्, यो उनको लागि अपमान हो!
उनलाई वास्तवमा लगातार तीन पटक जियांग नि byले कुटे।
अर्को पंच, ज्या J निing र दानव किंग दुबै एकै समयमा पछि हटे।
जिiang निingलाई काँधमा थप्पड हालेको थियो, र मासु र रगतको तीखो नाखूनले काट्यो, रगत बाहिर निस्कियो, यो देखेर अचम्म लाग्यो।
र शैतानको मुखको कुना रगतले भरिए।
उसले आफ्नो मुखको कुनाबाट रगत पखाल्न आफ्नो हात फैलाए, उसको आँखा चिसो र चिसो हुँदै गयो।
"अप्रत्याशित रूपमा तपाई यत्ति गहिरो लुकाउनुभयो।" को
दानव राजा घुँयेत्रो हाले, उनको स्याउ चिप्लयो, र रगतको अर्को छाल बढ्यो, र यो वाहको साथ सीधा बाहिर फुलायो।
उनले अन्ततः बुझे कि किन जेiang नि Jले आफूले भनेको कुराको वास्ता गरेनन्, उनको मुटु चट्टान जस्तै थियो, र उनले केवल आफ्नो मुक्काहरू निकाले, केवल कसरी उनलाई हिर्काउने भनेर सोच्दै। उनले आशा गरेनन् कि ज्याiang निingको मुट्ठीमा त्यस्तो शक्ति हुन्छ।
यसले सीधा मासु घुसाउन र उसको आन्तरिक अंगहरूमा आक्रमण गर्न सक्छ!
यदि उसले समयमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेन र आफ्नो मुट्ठी खोलेको छैन भने मलाई डर लाग्छ कि उनी यस घडीमा गम्भीर घाइते भएको हुनुपर्छ।
"तपाईंले भनेको होइन कि यो जी दाओ फिस्टको शक्तिको दशौं भाग मात्र हो?"
ज्याiang निing्गले हल्कासँग भने, "म तिमीलाई मार्न सक्दिन, यस्तो लाग्छ कि म वास्तवमै घरमा छैन।"
हो, उहाँ जि दाओ बक्सि knows जान्नुहुन्छ, तर यो पहिलो पटक हो कि उनले ज्याiang निing जस्ता बक्सिंग विधि देखेका छन्।
एक जो यस्तो दमनकारी आक्रमण थिएन, शारीरिक प्रतिरोधलाई समेत वेवास्ता गर्‍यो, आन्तरिक अ organs्गहरूमा प्रत्यक्ष आक्रमण गर्‍यो।
साधारण व्यक्तिहरूले आफ्नो आन्तरिक अंगहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्?
उहाँ जस्तो शैतान बाहेक, जो विभिन्न स्वभावबाट गुज्रिरहेको छ र आफ्नो कपाल मार्न पर्याप्त भएको ठाउँमा खेती गरेको छ, अरू कसले?
लगभग आज रोपेको।
तर अब जब उसले ज्याiang निingको चालहरू पत्ता लगाएको छ, डराउनुपर्ने कुनै कुरा छैन। जबसम्म उनी तयार छन्, ज्याiang निing फेरि आफूलाई चोट पुर्‍याउन चाहँदैनन्!
दुई पक्षको गति बिस्तारै उठ्यो। यद्यपि शैतानको मुखले जि J नि Nलाई अझै खिसी र उत्तेजित गरिरहेको थियो, तर उसलाई आफ्नो हृदयमा थाहा थियो कि यस चालले ज्याiang निingको कुनै काम गर्दैन जस्तो देखिन्छ।
ज्याiang नि too एकदम शान्त थिए।
यो सामान्य व्यक्ति जस्तो छैन।
उनले ज्याiang निingलाई हेरे, र ज्याiang निing पनि उनलाई हेरे, बिस्तारै निस्कदै, आफ्नो राज्य समायोजित गर्दै।
उनले ज्याiang निingको थकान देखे, यदि यसलाई केवल बितेको मात्र देख्यो, उनले यसलाई पहिले नै समातिसकेका थिए।
जियांग निing आखिर केवल एक नश्वर हो!
म कसरी लामो समय सम्म लड्न सक्छु?
शैतान हिचकिचाएन, ऊ उफ्रियो र एउटा भयंकर ताडमा गोली हान्यो। जियांग निingले उनलाई अभिवादन गर्न तुरुन्तै आफ्नो मुट्ठी उठाए। धमाधमको साथ, Jiang Ning स्पष्ट रूप मा पर्याप्त मजबूत थिएन, र एक दर्जन कदम पछि पछाडि।
"Hmph, तपाईं यस क्षण मा पकड गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईं पहिले नै धेरै राम्रो हुनुहुन्छ, तर पर्याप्त छैन!" को
दानव किंग हाँसे, किनभने ज्या J निing सीमामा पुगेका थिए र कुनै समय बर्बाद गर्न चाहँदैनथे।
उसले ज्या J निingलाई मार्ने छ र ज्याiang याओलाई टाढा लैजानेछ!
उहाँ फेरि हतार गर्नुभयो, ज्याiang निingले दाँत थाम्न रोकियो, र ती दुई व्यक्ति पागल जस्तै लडे, संसारलाई हल्लाउँदै!
भयानक कम्पनले जमिनलाई कम्पन भएको जस्तो देखियो, र त्यो हिंसात्मक शक्ति, यो मानवद्वारा कसरी उत्सर्जन गर्न सकिन्छ।
"तपाइँको गति कसरी सुस्त भयो?" को
दानव राजा हाँसे। “यस्तो लाग्छ कि तपाईं साँच्चिकै आफ्नो सीमामा हुनुहुन्छ। तिमीले यसलाई जबरजस्ती गर्न सक्दैनौ। ”
जिiang नि Nले एक शब्द भनेनन्, यस्तो देखिन्थ्यो कि यदि उसले बढी भनेमा, त्यसले यसको एक हिस्सा गुमाउनेछ। शक्ति, गति ढिलो हुन्छ, शक्ति कमजोर हुन्छ।
उसको आँखा अझै पक्का छ, बरफ जस्तै चिसो!
"Bang" यो हो
केवल कि Jiang Ning स्थिर पछाडि सर्दै थियो। यद्यपि उनले जिद्दी गरे पनि, दानव राजाको शक्ति चोटपटकबाट प्रभावित भएको देखिँदैन, तर जारी राख्यो। यो थालियो, ज्या J नि Nलाई थाँहा गरेको बेला मार्न खोज्दै!
"कसरी फिर्ता गर्ने?"
"तपाईं पछाडि आफ्नै छोरी हुनुहुन्छ, के तपाईं अझै पछाडि हट्न सक्नुहुन्छ?"
"म तिमीलाई भन्छु, म उसलाई मार्नेछु, र म उसको आँखालाई अनन्त शरीर खेती गर्न प्रयोग गर्नेछु, र म सधैंभरि बाँच्नेछु!" को
शैतान हाँसे। ज्याiang निingलाई उत्तेजित गर्ने, ज्याiang निingले अझै एउटा शब्द भनेनन्, तर ढु stone्गाको गठनतिर पछाडि हटिरहे।
अचानक, दानव राजा तुरुन्तै हराए, ज्याiang निing चकाचिपाहटमा थिए, र डेनम किंग उसको अघि नै थिए।
ज्याiang निing छक्क परे, र चाँडै आफ्नो हातहरू रोक्नको लागि। उही समयमा, दानव किंगको मुट्ठी पहिले नै भाँचेको थियो र ज्याiang निingको सिधा हातले प्रहार गर्यो।
जियांग निaएक तोनबलको जस्तै माथि उड्यो, एक ठूलो बोल्डरमा भारी पटक पटक पटक, र रोकिनु अघि धेरै पटक जमीनमा पल्टियो।
ज्याiang निing्गले आफ्नो मुख खोले र मुखको रगत बहाए, र उनको अनुहार तत्काल फिक्का भयो।
ऊ खडा हुन संघर्ष गरिरहेको थियो, ढु on्गामा अडेस लागी, एकदम पेन्सन गर्दै, यदि उसको आँखा दृढ थियो भने, दानव राजाले अझै पनि जिiang्ग निing आफ्नो सीमामा पुगेको देख्न सके।
"किन हैन?" को
डेमन किंगले चिसो भाव व्यक्त गर्दै स्नेह देखाए र कदम क्रमशः ज्याiang निingतिर हिडे।
यो लुकेको खतरा हो, जे भए पनि, उसलाई मार्नु पर्छ। उनी सँधै महसुस गर्थे कि जिiang निo द्वारा नियन्त्रित जी दाओ बक्सि technique प्राविधिक अलि अनौंठो छ र उनी एक खतरा हो।
जबसम्म जियांग नि killed मारिन्छ, यो एक पटक र सबैको लागि गरिनेछ, र भविष्यको समस्या सदाको लागि जोगिनेछ।
"हा, तिमी मलाई मार्न चाहँदैनौ?"
ज्याiang निing हाँस्छिन्, "म तिमीलाई मेरी छोरी लिने छैन।"
उसले बिस्तारै आफ्नो मुट्ठी उठायो र दानव राजा आफूतिर हिंडिरहेको देख्यो।
दानव राजा पनि बिस्तारै आफ्नो हात उठाइयो।
“म तिम्रा छोरीलाई मात्र लैजानेछु तर तिम्रो आफ्नै आँखाले देख्न दिनेछु कि तिम्रा छोरी अमर बलिदान भइन्!”
"जब म वास्तवमै सदा जीवित छु, तपाईंले देख्नुहुनेछ कि संसार साँच्चिकै अँध्यारो हुँदैछ!" को
दानव राजा यसको प्रतीक्षा गर्दै थिए जस्तो देखिन्थ्यो र ठूलो स्वरले हाँस्नुभयो, “सबैको हृदयमा अन्धकार छ। म तिनीहरूलाई सबै देखाउन दिनेछु। म सबैलाई आफू को हुँ भनेर अनुमति दिन्छु! ”
ज्याiang निingको अनुहार डूब्यो।
“हुनसक्छ तपाईंलाई थाहा छैन? ती तथाकथित नियमहरू, तथाकथित नैतिकता, तथाकथित कानूनहरू सबैलाई प्रतिबन्धित गर्छन् र सबैलाई आफैंमा असक्षम बनाउँछन्! ” को
शैतान हाँसे, उसको अनुहार अचानक डूब्यो, र उनको मुस्कान खराब थियो। मेई, "तपाईंले भनेको थियो, जब मानिसहरूले आफ्नो प्रकृतिलाई स्वतन्त्र गर्छन्, तब यो संसार के हुनेछ?"
विभाग उपन्यास ट्याग अरबपति भगवान युद्ध, युद्ध उपन्यासको अरबपति भगवान, अरबपति भगवान युद्ध Webnovel, मुक्त, उपन्यास